डडेलधुरामा असोजे झरीले धानमा ठूलो क्षति
शेर भण्डारी डडेलधुरा, १३ असोज
डडेलधुरामा पाक्नै लागेको धानबालीमा लगातार परेको पानीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। असारमा रोप्ने समयमा पानी नपरेर हैरान भएका किसान फेरि पाक्नै लागेको धान पानीले सखाप पारेपछि चिन्तित भएका छन्।
लगातारको पानीले खेतबारीका धानसँगै मस्याङलगायत दलहन बालीका साथै तरकारीमा समेत क्षति पुर्‍याएको किसानले बताएका छन्। अमरगढी– २ का स्थानीय हीरादेवी सार्कीका अनुसार पानीले अमरगढी नगरपालिका– २ र ३ डोटी घटाल क्षेत्रमा लगाएको खेतमा पाकेको धान बटुल्नै नमिल्ने गरी झारेको छ।
गाउँमा धानबाली हुँदैन। खेतका लगाएको सबै धान पानीले झार्‍याे । पाकेको धान पानीले झारेपछि के खाने के लगाउने भन्ने चिन्ता लागेको अमरगढी– ३ का स्थानीय किशोरकुमार बोहराले बताए।
‘गत असारमा खेतमा मानीसहरूलाई ज्याला दिएर खेतमा रोपाईं गरेकी हुँ। हे भगवान् ! यो कस्तो संकट आइपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘अब के खाने ? खानका लागि चामल पनि कहाँबाट किनेर ल्याउने।’ उनका अनुसार धानको बिउसमेत नरहने गरी पानीले झारिदिएको छ।
किसानका अनुसार खेतमा धान काट्न सुरु गरिएको थियो। स्थानीय लक्ष्मी भण्डारीले खेतमा काटेर राखेको धानको पन्जामा पानी वर्षिंदा धान सबै झारेको बताइन्। ‘धानको बिउ छरेभन्दा बाक्लो हुने गरी खेतबारीमा धान झारेको छ। वर्षभरि गरेको दुःख खेर गयो,’ उनले भनिन्, ‘डडेलधुरामा सबैभन्दा बढी धान हुने क्षेत्रको रूपमा डोटी घटाल चिनिन्छ। पानी परेपछि धानको फल झरेर पराल मात्रै बाँकी छ। हाम्रो त करिब ५० प्रतिशत धानबाली नष्ट पारेको छ।’
जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा धानमा लगातारको झरीले क्षति गरेको छ। जिल्लाको अजयमेरु, आलिताल, नवदुर्गा र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा पनि पानीले धानमा असर गरेको बताइएको छ। ‘कसैले धान काट्न पाएका छैनन्। काटेकाले भित्र्याउन पाएका छैनन्,’ अजयमेरु– २ का स्थानीय चन्द्र ऐरले बताए।
लगातारको असोजे झरीले किसानलाई बाँकी रहेको धान पनि कसरी भित्र्याउने भन्ने समस्याले पिरोलेको छ। कतिपय ठाउँमा काटेको धान खेतमै भिजेको छ भने कतै पाकेको धान काटन नपाएर खेतमै झर्ने अवस्था पुगेको छ।
कतिपय कृषकहरूले चाँडो पाक्ने धान रोपेर खेतमा गहुँ छर्ने गरेका छन्। तर, यस वर्ष असोज मध्यसम्म पनि लगातार वर्षा भइरहेका कारण समस्या हुने गरेको छ। अहिले भइरहेको वर्षाले तरकारी उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ, जसका कारण बजारमा तरकारीको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १३, २०७६, १७:१९:००